ग्याङनम स्टाइलपछि ह्याङओभर सार्वजनिक (भिडियो)
दक्षिण कोरियाका चर्चित गायक साइको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ह्याङओभर बोलको यो गीतलाई आइतबार मध्यरातमा सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक भएलगतै गीत हेर्ने दर्शकको संख्या २७ लाख पुगिसकेको छ । साइ र...
अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव बिहीबारदेखि काठमाडौंमा
काठमाडौँ, २५ जेठ । आठौँ नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी चलचित्र महोत्सव, २०७१ यही जेठ २९ गतेदेखि सुरु हुने भएको छ । प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा जेठ ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवलाई इन्डिजिनियस फिल्म अर्काइभ (आइफा) ले आयोजना...
नायिका करिस्माले अर्को बिहे गर्दै
बलिउड फिल्म क्षेत्रमा धेरै जसो नायक नायिकाले दाम्पत्य जीवनलाई सँधैभरी राम्रो अवस्थामा राख्न नसकेका खबरहरु सार्वजनिक भईरहेका हुन्छन् । बलिउड नायक नायिकाहरु आफ्नो श्रीमान–श्रीमती छोड्ने र अर्काको श्रीमान खोस्ने परिपाटी व्याप्त छ । यस्तै...
डान्स इन्डियामा तहल्का मच्चाएकी तेरियालाई देवीलाई झैं सम्मान
रूपन्देही, २२ जेठ । बाह्र वर्षीया तेरिया फैजामगरलाई भव्य सम्मान गरिएको छ। तेरियाले भविष्यमा कुशल नृत्यकार वा नायिका बन्ने लक्ष्य भएको बताएकी छन्। भारतको प्रसिद्ध सिरियल च्यानल जीटीभीद्वारा आयोजित डान्स इन्डिया डान्स (डीआईडी) लिटिल...
शितल निवासमै बोलाएर राष्ट्रपतिले दिए गरिमालाई बधाई
काठमाडौं, २३ जेठ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सार्क फिल्म फेस्टिभलमा उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जित्न सफल नायिका गरिमा पन्तलाई बधाई दिएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा डाक्दै राष्ट्रपतिले गरिमालाई बधाई दिएका हुन् ।...
किन यति धेरै खुसी छन् सनी लियोनी ?
पोर्नको दुनियाबाट बलिउड छिरेकी सनी लियोनी यतिबेला निकै खुसी छन् । एमटीवीको डेटिङ शो ‘स्पिलिट्सविला–७’ को होस्ट भएपछि सनी यति बिध्न खुसी भएकी हुन् । सनीले भनेकी छन् यो कार्यक्रमको होस्टिङ गर्न पाउनु कुनै...
यसरी देखाइन गायिकाले गोप्य अंग…
सेलिब्रेटीहरु उनीहरुको सृजना र प्रस्तुतीले भन्दा उरेन्ठेउलो व्यवहारले चर्चामा आउँछन् अचेल । खासगरी विश्वका चर्चित गायिकाहरु यो पंक्तीमा पर्छन् जसले दर्शकका अगाडी गएर कपडा खोल्छन् र अश्लिलता प्रदर्शन गर्छन् । विश्वमा अहिले सबैभन्दा बढि...
दीपिकाको रेट कति ?
बलिउडकी डिम्पल गर्ल दिपिका पादुकोणले आफ्नो आउँदै गरेको फिल्म ‘बाजीराव मस्तानीका’ लागि आठ करोड भारतीय रुपयाँ ज्याला लिएकी छन् । संजय लीला भन्साली १५ बर्ष अघि नै बाजीराल मस्तानी बनाउन चाहन्थे । यो फिल्म...
दीपकराज गिरीले ‘तितो सत्य’छाडे
नेपाल टेलिभिजनको चर्चित हाँस्य श्रृंखला ‘तितो सत्य’का निर्देशक दीपकराज गिरी उक्त श्रृंखलाबाट बाहिरिएका छन् । पछिल्लो समय आँफै चलचित्र निर्माणमा जुटेका दिपकले तितो सत्यसंगको सम्बन्ध तोडेका हुन् । यसैबर्ष प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘छ एकान...
कसैको ‘नो’ कसैलाई चान्स …
३० जेठमा प्रतीक्षित फिल्म रिलिज हुँदै छ, मुखौटा। अर्पण थापाको पहिलो निर्देशन र गिनेचुनेका कलाकारको जम्बो टोलीका कारण फिल्मप्रति धेरै अपेक्षा राखिएको छ। निशा अधिकारी यही फिल्मकी मुख्य अभिनेत्री हुन्। प्रतिष्ठित ब्यानरबाट अफर नआइरहेका...
को सँग बिहे गर्दैछिन नीता ?
वि.सं २०७१ नेपाली सिनेमाका लागि कलाकारहरुको बिहे बर्ष जस्तै हुने भएको छ । देशका चर्चित कलाकारहरु यसै बर्ष बिहे गर्दैछन् । कसैले भने घरजम गरिसकेका छन् । यसैबिच नायिका नीता ढुंगानाले पनि आफ्नो घरमा...
मनिषा भन्छिन्- ‘एक्लो भए पनि खुशी साथ बाँचिरहेको छु’
पाठेघरको क्यान्सरको सफल उपचार पछि स्वस्थ्य बनेकी बलिउड अभिनेत्री नेपाली चेली मनिषा कोइरालाले आफुले रमाइलो जिन्दगी बिताइरहेको बताएकी छन्। हाल मुम्बईमा बसिरहेकी अभिनेत्रीले भारतीय सञ्चारमाध्यमसित कुरा गर्दै आफु सन्तुष्टपूर्ण तरिकाले जीवन चलाइरहेको जनाएकी छन्।...
« 1 … 438 439 440 441 442 … 448 »